क्रमसः बिग्रन थाल्यो डा. केसीको स्वास्थ्य
इलाम । बुधबारदेखि अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्यमा समस्या आएको छ । शुक्रबारदेखि उनको छाती दुख्न थालेको छ भने रक्तचाप न्यून हुँदै गएको छ ।
अनसनको दोस्रो दिनको बेलुकीबाट स्वास्थ्यमा समस्या आउन थालेको छ । उनको रक्तचाप घट्नुको साथै शरीरमा चिसो पसिना आउने, हात थर्थराउने समस्या देखिएको छ । उनलाई खोकी निरन्तर लागिरहेकाले निमोनिया तथा अन्य संक्रमणको जोखिम बढ्ने देखिएको भन्दै चिकित्सकले सावधानी अपनाउन थालेका छन् ।
शरीरमा पानीको मात्रा र इलेक्ट्रोलाइट्सको कमीका कारण इलाम अस्पतालको स्वास्थ्य टोलीले नसामा क्यानुला राख्न नसकेको बताइएको छ । मुटुको चाल ठिकै रहे पनि कुनै समय असामान्य हुन सक्ने भएकाले निरन्तर मोनिटरिङ गरिएको डा. रामकृष्ण आचार्य बताउँछन् ।
नीय स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले उनको स्वास्थ्यमा निरन्तर निगरानी गरिरहेको छ । उनको उपचारमा डा. रामकृष्ण आचार्यका साथै डा. बृजेन्द्र, डा. सर्विन्द्र, डा. सञ्जय लगायत स्थानीय रूपमा उपलब्ध चिकित्सक, नर्स, हेल्थ असिस्टेन्टहरुको टोली छ ।
यता, उनलाई भेट्न आउने शुभचिन्तकहरुलाई परैबाट भेट्न आग्रह गर्दै सत्याग्रह परिसरको मध्य भागमा डोरी राखेर अलग्गै राखिएको छ ।